ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်(၃)ဦးအတွဲ (၁)
ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်(၃)ဦးအတွဲ အပိုင်း(၁)
15 Oct 2018 . 4:24 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပရိသတ်စိတ်အ၀င်စားဆုံး၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု အပြင်းထန်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားတယ်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲအမည်နဲ့ စတင်ကျင်းပခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်လို့ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲသက်တမ်းက အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း(၆၀)ရှိနေပါပြီ။ ပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်အတွဲ အများကြီးရှိခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီအထဲကမှ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်(၃)ဦးအတွဲတွေကို နာမည်ကြီး ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းက အခုလို ရွေးချယ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် . . .
၁၀. Rudi Voller, Alen Boksic, Abedi Pele (မာဆေးလ် – ၁၉၉၃)
ချန်ပီယံလိဂ်လို့ အမည်စတင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉၂-၉၃ ရာသီမှာ ပထမဆုံးဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ မာဆေးလ်အသင်းအတွက် သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့သူတွေပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရူဒီဗောင်လာ၊ အလန်ဘော့ဆစ်၊ အဘီဒီပီလီတို့ရဲ့ ခြေစွမ်းက အကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်ရှိနေပြီး ဘယ်လိုပြိုင်ဘက်မျိုးမဆို ချေမှုန်းဖို့ အသင့်ရှိနေခဲ့တယ်။
၉.Eusebio, Jose Aguas, Jose Augusto (ဘင်ဖီကာ – ၁၉၆၂)
Eusebio, Jose Aguas, Jose Augusto
ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ရီးယဲလ်အသင်း လွှမ်းမိုးနေမှုကို အဆုံးသတ်ခဲ့တာက ပေါ်တူဂီထိပ်သီး ဘင်ဖီကာအသင်းပါပဲ။ ပေါ်တူဂီဂန္ထ၀င်ကစားသမား အူဆီဘီယိုရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ဟိုဆေးအော်ဂတ်စ်၊ ဟိုဆေးအော်ဂတ်စတို တို့ဟာ ဘင်ဖီကာအသင်းအတွက် ၁၉၆၁-၆၂၊ ၁၉၆၂-၆၃ (၂)ရာသီဆက် ဥရောပဖလားရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
၈.Del Piero, Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli (ဂျူဗင်တပ်စ် – ၁၉၉၆)
Del Piero, Gianluca Vialli
ဒယ်လ်ပီယာရို၊ ဗီယာလီ၊ ရာဗင်နယ်လီတို့ရဲ့ နာမည်တွေက အခုအချိန်အထိ ဂျူဗင်တပ်စ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ စွဲမြဲစွာ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဒီ(၃)ဦးစလုံးက Skill ၊ Finishing ၊ Pace စတဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီး အချိန်အများကြီး တွဲဖက်ကစားခွင့်မရခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းအရ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်အတွဲစာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။
၇.Gerd Muller, Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge (ဘိုင်ယန်မြူးနစ် – ၁၉၇၆)
Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအတွက်သာမက ဂျာမနီအသင်းအတွက်ပါ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရယူနိုင်ခဲ့ကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂတ်မူလာ၊ အူလီဟိုးနက်စ်၊ ရူမင်နစ်ဂီ တို့ရဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ပြသနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
၆. Messi, Thierry Henry, Samuel Eto’o (ဘာစီလိုနာ – ၂၀၀၉)
Messi, Thierry Henry, Samuel Eto’o
ဒီတိုက်စစ်အတွဲကိုတော့ ထူးထူးခြားခြား မိတ်ဆက်ပေးစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာစီလိုနာရဲ့ ခေတ်သစ်တစ်ခု ပြန်စနိုင်အောင် အခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်၊ လာလီဂါအပါအ၀င် ဆုဖလားတွေ အများကြီး ရယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Photo:The Sun,Getty Images,AFP
ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈ(၃)ဦးအတှဲ အပိုငျး(၁)
ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲဆိုတာက ကမ်ဘာပျေါမှာ ပရိသတျစိတျအဝငျစားဆုံး၊ ပွိုငျဆိုငျမှု အပွငျးထနျဆုံးအဖွဈ သတျမှတျခံထားတယျ။ ၁၉၅၈ ခုနှဈမှာ ဥရောပဖလားပွိုငျပှဲအမညျနဲ့ စတငျကငျြးပခဲ့ပမေယျ့ ၁၉၉၂ ခုနှဈမှာ ခနျြပီယံလိဂျလို့ အမညျပွောငျးလဲခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲသကျတမျးက အခုဆိုရငျ နှဈပေါငျး(၆၀)ရှိနပေါပွီ။ ပွိုငျပှဲကာလတဈလြှောကျမှာ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ တိုကျစဈအတှဲ အမြားကွီးရှိခဲ့ဖူးပွီး အဲဒီအထဲကမှ အကောငျးဆုံးတိုကျစဈ(၃)ဦးအတှဲတှကေို နာမညျကွီး ပွငျသဈဘောလုံးမဂ်ဂဇငျးက အခုလို ရှေးခယျြဖျောပွခဲ့ပါတယျ . . .
၁၀. Rudi Voller, Alen Boksic, Abedi Pele (မာဆေးလျ – ၁၉၉၃)
ခနျြပီယံလိဂျလို့ အမညျစတငျပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉၂-၉၃ ရာသီမှာ ပထမဆုံးဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ မာဆေးလျအသငျးအတှကျ သူရဲကောငျးဖွဈခဲ့သူတှပေါ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ရူဒီဗောငျလာ၊ အလနျဘော့ဆဈ၊ အဘီဒီပီလီတို့ရဲ့ ခွစှေမျးက အကောငျးဆုံးအခြိနျရောကျရှိနပွေီး ဘယျလိုပွိုငျဘကျမြိုးမဆို ခမြှေုနျးဖို့ အသငျ့ရှိနခေဲ့တယျ။
၉.Eusebio, Jose Aguas, Jose Augusto (ဘငျဖီကာ – ၁၉၆၂)
ဥရောပဖလားပွိုငျပှဲမှာ ရီးယဲလျအသငျး လှမျးမိုးနမှေုကို အဆုံးသတျခဲ့တာက ပျေါတူဂီထိပျသီး ဘငျဖီကာအသငျးပါပဲ။ ပျေါတူဂီဂန်ထဝငျကစားသမား အူဆီဘီယိုရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ ဟိုဆေးအျောဂတျဈ၊ ဟိုဆေးအျောဂတျစတို တို့ဟာ ဘငျဖီကာအသငျးအတှကျ ၁၉၆၁-၆၂၊ ၁၉၆၂-၆၃ (၂)ရာသီဆကျ ဥရောပဖလားရရှိအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့ကွတယျ။
၈.Del Piero, Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli (ဂြူဗငျတပျဈ – ၁၉၉၆)
ဒယျလျပီယာရို၊ ဗီယာလီ၊ ရာဗငျနယျလီတို့ရဲ့ နာမညျတှကေ အခုအခြိနျအထိ ဂြူဗငျတပျဈပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ စှဲမွဲစှာ ရှိနတေုနျးပါပဲ။ ဒီ(၃)ဦးစလုံးက Skill ၊ Finishing ၊ Pace စတဲ့ အရညျအသှေးတှနေဲ့ ပွညျ့စုံပွီး အခြိနျအမြားကွီး တှဲဖကျကစားခှငျ့မရခဲ့ပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျမှတျတမျးအရ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ အကောငျးဆုံးတိုကျစဈအတှဲစာရငျးမှာ ရှေးခယျြခံခဲ့ရတာပါ။
၇.Gerd Muller, Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge (ဘိုငျယနျမွူးနဈ – ၁၉၇၆)
ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးအတှကျသာမက ဂြာမနီအသငျးအတှကျပါ အောငျမွငျမှုတှေ အမြားကွီး ရယူနိုငျခဲ့ကွသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဂတျမူလာ၊ အူလီဟိုးနကျဈ၊ ရူမငျနဈဂီ တို့ရဲ့ ခတျေတဈခတျေမှာ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျတှေ ပွသနိုငျခဲ့ကွတယျ။
၆. Messi, Thierry Henry, Samuel Eto’o (ဘာစီလိုနာ – ၂၀၀၉)
ဒီတိုကျစဈအတှဲကိုတော့ ထူးထူးခွားခွား မိတျဆကျပေးစရာ လိုမယျမထငျပါဘူး။ ဘာစီလိုနာရဲ့ ခတျေသဈတဈခု ပွနျစနိုငျအောငျ အခွခေံအုတျမွဈခပြေးခဲ့သူတှဖွေဈပွီး ခနျြပီယံလိဂျ၊ လာလီဂါအပါအဝငျ ဆုဖလားတှေ အမြားကွီး ရယူနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။